थ्रिड्री चलचित्र बनाउन सजिलो छैन | SouryaOnline
थ्रिड्री चलचित्र बनाउन सजिलो छैन
सौर्य अनलाइन २०६९ चैत ५ गते ५:५२ मा प्रकाशित
निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल कला क्षेत्रमा चिनाइरहनुपर्ने नाम भने होइन । द ‘युगदेखि युगसम्म’ चलचित्रबाट निर्देशनमा प्रवेश गरेका खनालले छोटै समयमा आधा दर्जन हाराहरीका चलचित्र निर्देशन गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय ‘चपली हाइट’ नामक चलचित्र निर्देशन गरेका खनाल यसैबाट फरक तथा व्यावसायिक चलचित्र निर्माण गर्ने निर्देशकका रूपमा समेत चिनिए । चलचित्रमा सधैँ नयाँ प्रयोग गर्न रुचाउने निर्देशक खनाल यतिखेर भने नेपालमा थ्रिडी चलचित्र भित्र्याउन दिनरात मेहनत गरिरहेका छन् । प्रस्तुत छ निर्देशक खनालसँग सौर्यका लागि गरिएको कुराकानीको केही अंश
आफ्नै निर्देशन रहेको पछिल्लो चलचित्र ‘भिजिलान्ते’को प्राविधिक कार्य अहिले अन्तिम चरणमा छ । यो पूरा गर्ने काममा लागिपरेको छु, मेरो अर्का चलचित्र ‘झोले’ पनि सम्पादनका अन्तिम चरणमा छ । यी दुवै चलचित्रको काममा एकसाथ लागिपरेको छु ।
थ्रिडी प्रविधिमा चलचित्र निर्माण गर्नुभयो नि ?
विश्वबजारका चलचित्रले यतिखेर प्राविधिक रूपमा निकै फड्को मारिसकेको छ । एक समय हलिउडका चलचित्र पनि दर्शकका अभावमा शून्य स्थितिमा पुगेको थियो । सो समयमा हलिउडले थ्रिडी प्रविधिमा चलचित्र बनाएर दर्शकलाई हलसम्म तान्न सफल भएको थियो । अहिले हाम्रो चलचित्र क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ । चलचित्र प्रदर्शनमा आए पनि दर्शक हलसम्म आइरहेका छैनन् । यो अवस्थामा नयाँ प्रविधिले चलचित्र निर्माण गरेर दर्शकलाई हलसम्म ल्याउन सकिन्छ भन्ने लागेर थ्रिडी चलचित्र निर्माण गरेको हँ । विश्वबजारमा बढ्दै गएको टेक्नोलोजीसँगै हाम्रो चलचित्र क्षेत्र आगाडि बढ्नु पनि त पर्‍यो नि ।
के हो थ्रिडी प्रविधि ?
यसको अर्थ एकदम धेरै छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा आँखाले सिधैँ हेर्दा जुन कुरा टाढाको टाढै र नजिकको नजिकै महसुस हुन्छ । चलचित्रमार्फत पनि त्यस्ता कुरा जस्ताको तस्तै महसुस गराउने प्रविधि नै थ्रिडी हो । यो प्रविधिमा चलचित्र छायांकन गर्न क्यामेरामा दुई लेन्स लगाउनुपर्छ ।
थ्रिडी चलचित्र निर्माणमा कतिको सहज छ ?
यो सहज प्रविधि हैन । यो प्रविधिमा चलचित्र निर्माण गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाएसरह हो । हलिउडमा यो प्रविधिले तीन चलचित्र मात्र बनेका भए पनि नेपालमा यो नै पहिलो हो । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा यो प्रविधि हामीले अलि छिट्टै ल्याएका छौँ, सोचेअनुसार काम पनि भइरहेको छ ।
एकाएक थ्रिडी चलचित्र निर्माण गर्नुको कारणचाहिँ के हुनसक्छ ?
म सधैँ नयाँ र नौलो प्रयोग गर्न रुचाउने व्यक्ति हँ । नेपालको चलचित्र इतिहासमा फरक चलचित्र निर्माण गर्नेमा नाम लेखाउन अनि चलचित्रका दर्शक बढाउन मैले यो प्रविधि भित्र्याउन खोजेको हो ।
यो प्रविधिमा चलचित्र बनाउन सहज छ त ?
त्यति सहज त छैन । तैपनि, मैले असहज महसुस गरेको छैन । किनभने यो चलचित्र खिच्ने थ्रिडी क्यामेरादेखि प्रविधिसम्म हामीले स्वदेशमा भित्र्याएका छौँ । प्रविधि नै ल्याएकाले निर्माणमा केही सहज पनि भएको छ ।
थ्रिडीमै सबै दर्शकलाई चलचित्र देखाउन सकिन्छ त ?
थ्रिडी भएका चलचित्र भवनमा थ्रिडीमै देखाउने हो । यो प्रविधि नभएकोमा पनि हामीले अन्य सिस्टम र चस्माको व्यवस्था गरेका छौँ ।
नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदा चलचित्रको बजेट पनि बढेको होला, के यो छैन त ?
क्यामरा, पोस्टप्रोडक्सनका समान आदि सबै भित्र्याउनु परेकाले अली बढी लागेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । फेरि चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गर्न खोजेकाले पनि रिस्की त हुने नै भयो नि । रिक्स उठाउन पछि हट्यो भने कहिल्यै नयाँ प्रयोग गर्न सकिन्न ।
थ्रिडी चलचित्र दर्शकको चाहना बुझेर बनाएको हो त ?
चलचित्र बनाउने दर्शकका लागि हो । उनीहरूको चाहना त बुझ्नुपर्छ नै । त्यस माथि पनि नयाँ र नौला चलचित्र दर्शकका सामु पस्कनु मेकरको पहिलो कर्तव्य हो । यस चलचित्रमा सबैको चाहना समेटेको छु भने आफ्नो कर्तव्य पालाना पनि गरेको छु ।
थ्रिडी हेर्ने चस्मामा लगानी पनि भयो नि ?
सबै हलमा थ्रिडी नभएकाले चस्मा पनि छैन । सबै दर्शकले थ्रिडी महसुस गरून् भनेर आफैँले चस्मा भित्र्याएको छु । नयाँ सामग्री ल्याउँदा लगानी त हुन्छ नै ।
थ्रिडी चलचित्र दर्शकले बुझ्छन् त ?
दर्शकले चलचित्र नबुझ्ने कुरै भएन । चलचित्र भनेको चित्र हेरे हेरेपछि बुझिन्छ । दर्शकले डाइलग म्युट भएका चलचित्र त बुझ्छन् भने यो किन नबुझ्ने । सबैले बुझ्छन् र मनपराउँछन् भन्ने मलाई लागेको छ ।
चलचित्रको प्रदर्शन सर्‍यो नि ?
आगामी ९ गते प्रदर्शनमा ल्याउने हाम्रो योजना थियो । प्राविधिक कार्य अझै बाँकी रहेकाले चलचित्रको रिलिज सारिएको छ । आगामी २३ गते यसलाई सार्वजनिक प्रदर्शनमा ल्याउने हाम्रो योजना छ ।